३ करोड फ्लोअर्स भएकी नेपाली टिकटक स्टार निशाको भिडियोले हंगामा – Dainik Samchar
January 23, 2021 254
सम्राट शुक्ला टिकटक स्टार निशा गुरागाई, तपाईले पछिल्ला दिनहरुमा यो नाम धेरै सुन्नु भएको हुनुपर्छ । तर किन निशा गुरागाईंको नाम आजकल यति धेरै चर्चामा रहेको छ भनेर कारण बताउन सम्भवतः मूर्खता हुनेछ किनभने तपाई पहिले नै एकदम अगाडि हुनुहुन्छ ।
तर यस संसारमा केही निर्दोष मान्छेहरु छन्, म जस्तो, जो म जस्तो पूर्ण निर्दोष छ, त्यसैले उनीहरूलाई निशा गुरागाईंको नाम किन चर्चामा आयो भन्ने थाहा छैन । उनको एक भिडियो आजकल भाइरल भइरहेको छ, जसमा उनी आफ्नो प्रेमीसँग अलग्गै स्तरमा पुगेर रमाइलो गर्दैछिन्। जुन तल्लो स्तारको भिडियो अत्याधिक भाइरल बनिरहेको छ ।
निशा निकै प्रख्यात टिकटक स्टार हुन् । उनी नेपाली युवती हुन् । उनलाई टिकटकमा फलो गर्नेहरु पाैने ३ करोड भन्दा बढी छन् । टिकटकमा हेर्नुहोस् उनी केही वर्षमा यति धेरै चर्चामा आइन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
ह्या खैर म किन टिकटक भर्सेस यूट्यूब भन्दै बस्नु ? मेरो विचारमा यो एकदम गम्भीर खालको घटना भएको छ । यो एक अनजानवश भएको गल्ती हो वा जानेर गरिएको विषय हो, हामी सबै कुरा बुझ्नेछौँ । हामी यस प्रकरणलाई दुई भागमा विभाजन गर्दछौं ।
हामी यो मान्ने छौं कि यो कसैको षडयन्त्र हो । यसमा निशा यस षडयन्त्रको पञ्जामा परेकी हुन् । संसारमा यस्ता केही पागलप्रेमी पनि हुन्छन्, जो प्रेममा पर्दा हातको नशामा क्षति गरेर र गतको पत्र लेख्नेसम्मका काम गर्छन । त्यसकारण निशामाथि पनि यस्तो हुन सक्छ ।
निशाको उस्को केटासाथिसँग विवाद भएर यो सब कुरा बाहिर आएको हो कि भन्नेहरु पनि धेरै छन् । उनीहरु बीचको विवाद यति धेरै बढ्यो कि प्रेमीले उनीहरुको एक दुर्लभ भिडियो भाइरल गराइदिए । किनकि निशा टिकटकमा निक्कै चर्चित भइसकेकी थिइन् । आफैँ भन्नुहोस् कि कसैको छवि बिगार्न कति समय लाग्छ ? जब कोही मान्छे कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, तब उसले विपक्षीलाई बदनाम गर्न थाल्छ । उनका लागि यो भिडियो त्यही भएको हुनुपर्छ । म त्यही तर्क गर्छु ।
मैले भन्न लागेको दोस्रो तर्कबारे तपाईंलाई व्यक्तिहरू बुझ्नका लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ । सधैँ चर्चामा बस्नु पनि एक कला हो, यो सबैका लागि सम्भव पनि हुँदैन । तर धेरै व्यक्तिहरूमा यो कला पोखिने गरि भरिएको हुन्छ ।
पहिले मानिस प्रसिद्ध हुनका लागि आफ्नो कलाको साहारा लिन्थे । उनीहरु कडा परिश्रम गर्थे तर अहिले समय परिवर्तन भयो । अहिलेको समयमा प्रतिस्पर्धा पनि हरेक क्षेत्रमा बढेको छ । अब मानिसहरू चर्चामा आउनका लागि एकदम तल्लो स्तरको कामको पनि सहारा लिन तयार हुन्छन् । यो अचम्मको कुरा हो कि यसमा केहि सफल हुन्छन्, तर केहि हुँदैनन् ।
हामीले राखी सावन्तको नाम सुनेका छौ, उनले ड्रामा क्वीनको उपाधि पाएकी छिन् । उनलाई यो पदक किन मिल्यो किनकी उनले यस्तो अवसर छोडेकी छैनन, जहाँ उनको चर्चा नभएको हो । राखी सबै विवादहरु यहाँसम्म की उनीसँग कुनै सम्बन्ध नभएको विषयमा अक्सर बोल्ने गर्छिन । कहिले मीका सिंहसँग चु म्बन, त कहिले मिडियाको अगाडि दिपक कलालसँग गरिएको हर्कत पनि खुब चर्चामा हुन्थ्यो । अब मैले दीपक कलालको नाम लिइसके अब यसका बारेमा पनि केही भन्न मन लाग्यो ।
अब प्रश्न के हो भने आखिर दीपक कलाल किन यस्तो काम गर्छन् ? तपाईंले पनि सोच्नु भएको छ मलाई थाहा छ कि यदि दीपकले त्यस्तो काम गरेको छु भन्ने लागेमा उस्ले चाँडै नै नतिजा पनि प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छ । उ त्यस्ता हर्कतहरु सधै चर्चामा रहनका लागि मात्रै गर्दछ ।
तर तपाई यो कुरा जानेर दुःखी नहुनुहोस् किनभने दीपक वास्तविक जीवनमा एक सामान्य व्यक्ति हुन् । के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि टिकटकमा त्यस्ता बकवास भिडियो किन हुन्छ ? यस्को जवाफ हो कि मानिसहरूले अब यो चोर बाटोबाट प्रख्यात हुने तरिका फेला पारेका छन् ।
टिकटकमा आयो एकछिन रमाइलो गर्यो अनी भाइरल भयो । त्यसैले समग्रमा म भन्न चाहन्छु कि तपाईले जे हेर्नुहुन्छ, त्यसको पछाडि केहि कारण हुनुपर्दछ ।
अब यस केसको बारेमा कुरा गरौं, यो सम्भव हुन सक्छ कि यो क्लिप जानेर दुई जनाले चर्चामा रहनका लागि भाइरल बनाएको हुनुपर्छ । यस्ता घटनाहरुमा महिला कार्डहरू पनि खेल्नु पर्छ, जस्तै मलाई ब-दनाम गर्ने प्रयास हुँदैछ आदी धेरै रहेका छन् । यदि तपाईंलाई सम्झना छ भने, केहि दिन अघि पूनम पाण्डेको क्लिप पनि त्यस्तै भाइरल भयो ।
सामाजिक सञ्जालको यस संसारमा विभिन्न प्रकारका मानिस छन् । निशाका अनुसार यो नक्कली भिडियो हो, र जानाजानी उनलाई बदनाम गर्ने कोशिस गर्दैछ । यदि यो कुरा हो भने, म क सम खान्छु कि जो कोहीले यस्तो गर्यो उसले सजा-य पाउनु पर्छ । केटीलाई सम्मान गर्नु नै उसको सबैभन्दा ठूलो गहना हो । त्यसो गर्नेहरू द ण्डित हुनुपर्दछ, अर्को तिर यदि यो जानाजानी गरिएको स्टन्ट मात्रै हो भने निशा पनि त्यहि द ण्डको हकदार हुनुपर्छ ।
यद्यपि निशाले प्रहरी एफआईआरमा स्वीकार गरिन् कि यो भिडियो गल्तिवश उनको स्न्यापच्याट प्रोफाइलको कथामा अपलोड गरिएको थियो । जब दुई घण्टा पछि उनलाई उनको साथीले भिडियोबारे जानकारी गरायो । दुई घण्टा निशाको स्न्यापच्याट प्रोफाइलमा भिडियो रह्यो ।
पछि त्यतिखेर धेरै ढिलो भइसकेको थियो । आजकल संसार त्यस्तै छिटो छ । मोबाईलको स्क्रिन रेकर्डर खोल्न कति समय लाग्छ ? अब यो दु-र्घटनावश भएको हो वा जानाजानी भएको हो ? यो निसन्देह ज्ञात हो ।
Prevभेन्टिलेटरवाट बाहिर आए कञ्चन, १७ दिन पछि आवाज निकाल्दा पनि लिए अनिषाको नाम (भिडियो हेर्नुस्)
Nextशेरधन राईकी हुनेवाला श्रीमतीलाई तस्विरमा हेर्नुस् !
मौसमले २४ घण्टाका लागि दियो यस्तो चेतावनी
जेठ २२ गते शनिबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल